जाडोले छुँदैन प्रियंकालाई ? ( ६ तस्बिर) | Artist Khabar
जाडोले छुँदैन प्रियंकालाई ? ( ६ तस्बिर)	पुस, काठमाडौं । मंगलबार साँझ राजधानीको कुमारी हलमा चलचित्र लभ सासाको प्रिमियर गरीयो । थुप्रै नेपाली चलचित्र क्षेत्रका आर्टिस्टहरुका माझ गरीएको प्रिमियरमा नेपाली नायिकाहरु निकै सुन्दरी बनेर आएका थिए ।
चलचित्र नायिका केकी अधिकारी, कर्मा शाक्य र आशिफ शाह मुख्य भूमिका रहेको छ । प्रिमियर शोमा केकीको साथमा ऋचा शर्मा, वेनिशा हमाल, बर्षा राउत, रीमा विश्वकर्मा लगायतका नायिकाहरु आएका थिए । जसमा नायिका प्रियंकाको ड्रेसअप केही फरक देखिन्थ्यो ।
पुस महिनाको निकै जाडो समयमा पनि प्रियंकालाई त्यो जाडोले नछोएको देखिन्थ्यो । यस भन्दा अघि अघिका जाडो समयमा भएका कार्यक्रमहरुमा पनि प्रियंका यस्तैगरी जाने गर्दथिन् । सायद उनलाई जाडोले छुँदैन कि ?